विमान दुर्घटनाले उजाड्यो एक परिवार, बुवा आमा र छोरा सबैको मृत्यु (पुरा विवरण हेर्नुहोस ) – ONLIVENEPAL
ONLIVENEPAL Live New From Nepal
विमान दुर्घटनाले उजाड्यो एक परिवार, बुवा आमा र छोरा सबैको मृत्यु (पुरा विवरण हेर्नुहोस )
By	Livenepal | March 13, 2018
काठमाडौं, २९ फागुन — बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने द डेली स्टार पत्रिकाको अन्लाइन संस्करणमा मंगलवार एक बंगलादेशी जोडीको कथा छापिएको छ ।
त्यसमा लेखिएको छ :
सन्जिदा हक र उनका पति रफिक जमान दुवै कामकाजी व्यक्ति हुन् । महीनौंसम्म काम गरेर बोर भएका उनीहरूले विदेशमा छुट्टी मनाउने योजना बनाए । साथीहरूको सल्लाहमा उनीहरूले नेपाललाई गन्तव्य छाने । उनीहरूले आफ्नो सात वर्षीय छोरालाई पनि बिदामा घुमाउन सँगै लाने योजना बनाए ।
जोडीले आआफ्नो कार्यालयबाट छुट्टी पाए अनि योजनामुताबिक यूएस–बांग्ला विमानमा सोमवार चढे । उनीहरू ढाकास्थित हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमान चढेका थिए ।
यो नै उनीहरूको अन्तिम उडान बन्यो ।
सत्सट्ठी यात्रु र चार चालक दल सदस्य बोकेको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यसमा परी ४९ जनाको मृत्यु भयो ।
‘काठमाडौंस्थित अस्पतालले जारी गरेको पीडितको सूचीमा सन्जिदा, उनका श्रीमान् र उनीहरूको छोराको मृत्यु भएको हामीले थाहा पायौं,’ सुशासोनेर जोन्नो नागोरिक नामक नागरिक समाज संस्थाका सचिव आलम मजुमदारले बताए । सन्जिदा उक्त संस्थामा संयोजकको भूमिकामा थिइन् ।
रफिक चाहिँ अपांगता भएका व्यक्तिको हितमा काम गर्ने एक संस्थामा आबद्ध थिए ।
अनि त्यसै विमानमा चढेका इमराना कबिर हाशी र रोकिबुल हसनले पनि लामो समयदेखि छुट्टी मनाउने योजना बनाइरहेका थिए ।
राजशाही यूनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीमा कम्युटर साइन्स र इन्जिनियरिङ पढाउने शिक्षक हाशीले हालै १५ दिनको बिदा लिएकी थिइन् । उनी र उनका श्रीमान् हसनले काठमाडौं भ्रमण गर्ने योजना बनाए । हसन सेफालो बंगलादेश लिमिटेडमा सफ्टवेयर इन्जिनीयर थिए ।
तर उनीहरूको छुट्टी त्रासदीमा परिणत भयो । दुर्घटनामा रोकिबुलले ज्यान गुमाए । हाशी चाहिँ गम्भीर अवस्थामा छिन् ।
हाशी राजशाही शहरको तलाईमारी क्षेत्रमा भाडाको घरमा एक्लै बस्थिन् भने उनका श्रीमान् ढाकामा बस्थे ।
सोमवार विमान चढ्नुअघि अर्का यात्रु पियस रोयले ढाका विमानस्थलमा एक सेल्फी खिच्दै फेसबूक स्टेटस हालेका थिए ।
‘पाँच दिनका लागि देशलाई बाईबाई । सगरमाथाको मुलुकतिर जाँदैछु,’ उनले क्याप्सनमा लेखेका थिए ।
शेख सायेरा खातुन मेडिकल कलेजका पूर्वविद्यार्थी पियस दुर्घटनामा मारिए ।
अर्का यात्रु आल्मुन नाहर एन्नीले पनि लामो समयदेखि भ्रमणको योजना बनाएकी थिइन् । उनले आफ्नी तीन वर्षीया छोरी तमारा प्रियोन्मोयीलाई देशबाहिर भ्रमणमा लगेकी थिइन् ।
एन्नीसँग उनका श्रीमान् एफएच प्रियोक, उनका जेठाजु मेहेदी हसन र हसनकी पत्नी सैयदा कामरुननहर स्वर्णा पनि थिइन् ।
एन्नी र उनका परिवारका ती सदस्य दुर्घटनामा बाँचे तर तीन वर्षीया छोरीको मृत्यु भएको मेहदीका बुवा तोफाजेल होसेनले बताए ।
प्रियोकको अवस्था गम्भीर रहेको उनले थपे ।
बंगलादेशको योजना आयोगको जेनेरल इकोनोमिक्स डिभिजनमा कार्यरत नाजिया आफ्रिन चौधरी र उम्मे सल्मा पनि उक्त विमानमा थिए । उनीहरू वातावरणीय मामिलासम्बन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका थिए ।
उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । बाँच्ने मानिसको सूचीमा उनीहरूको नाम छैन ।-emechi.com
बलिउड फिल्मका महानायक अमिताभ बच्चन र उनकी पत्नी जया बच्चाको खाता लन्डन, फ्रान्स, दुबई र पेरिससहित देश विदेशका १९ बैंकमा छ भने यसमध्ये ४ बैंकको खाता जया बच्चनको रहेको छ, जसमा ६.८४ करोड रुपैया जम्मा भएको छ । जयाको केवल एक खाता देशभन्दा बाहिर एचएसबीसी बैंक दुबईमा छ, जसमा ६.५९ करोड रुपैया पैसा रहेको छ ।
गहना: जयासंग २६.१० करोड र अमिताभसंग ३६.३१ करोडको बहुमुल्य गहना रहेको छ । त्यस्तै जयासँग ६७, ७९,३१, ५४६ रुपैया र अमिताभसंग १,७१,०४,३५,०२० रुपैयाको चल सम्पति भएको उल्लेख गरिएको छ। शपथ पत्रमा जयाको नाममा १.३० अरबको र अमिताभको नाममा ३.३२ अरब रुपैयाको
अचल सम्पति भएको उल्लेख गरिएको छ। यसमा लखनउ, बाराबंकी, भोपाल, नोएडा, अहमदाबाद, पुणे, गांधीनगर, जूहू (मुम्बई) को जमिन पनि समावेश छ। धनि मान्छेसंग धेरै सम्पतिको साथै धेरै ऋण पनि हुने गर्दछ भनेझै जयामाथि ८७,३४,६२,०८५ रुपैयाको र अमिताभमाथि १८,२८,२०,९५१ रुपैयाको ऋण छ।
अमिताभसँग ४.४० करोडको र जयासँग ३०.२७ लाख बराबरको पेन्टीङ रहेको छ। अमिताभसँग ९ लाख रुपैयाको कलम छ, जबकी जयासंग १.४९ लाखको मोबाइल छ ।
← विश्वकै सबैभन्दा बढी हतियार आयात गर्ने देश भारत, कुन देशबाट धेरै हतियार ल्याउँछ र किन ? यस्तो छ खास कारण (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) विमान दुर्घटनामा नेपाली विद्यार्थीको निधनपछि बंगलादेशको मेडिकल कलेजले गर्यो यस्तो निर्णय, (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) →
आईजीपी भिडन्त माओवादी भर्सेस एमाले : खनाल कि खरेल ? यस्तो छ भित्री लेखाजोखा (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
दुखद खबर : एक्कासी चल्यो शक्तिशाली आँधी, ३७ जनाको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
सभामुखले दाङ पुगेर प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे खोले मुख, उनले यस्तो समेत भने (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
गृहमन्त्रीले बालकृष्ण ढुंगेललाई सुटुक्क भेटेर यस्तो भनेपछि… (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
अख्तियारद्वारा देशभरिका कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग, यसरी माग्नुको कारण यस्तो छ (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)